Visitor from US is reading लेखेर राख्नुस - प्रधानमन्त्रि भएरै छोड्छु
Visitor from US is reading women birth2frog?
Visitor is reading chhori haru ho.....
Visitor is reading Apartment available in Houston
Visitor from DE is reading Naked Dance To Please Indra
Visitor from US is reading Joshi & Khadka came clean!
[VIEWED 2448 TIMES]
Posted on 08-14-18 4:56 PM Reply [Subscribe]
मैले भन्या होइन --
रेखा थापा को प्रधानमन्त्रि हुने दावि
के तपाइलाइ रेखा थापा याद छ ? हो, आजकल रेखाको बारेमा त्यति सुनिंदैन । कुरा गर्दा पनि कसैले खासै चासो दिंदैन । किनकि एक जमानामा एक नम्बरकि अभिनेत्रि रेखाको चार्म अहिले घटिसकेको छ। छवि ओझाको फिल्मबाट सिने क्षेत्रमा भित्रिएकि रेखालाइ उनैले सबै भन्दा सफल हिरोइन बनाएको चर्चा चल्थ्यो । रेखा आँफै पनि क्षमतावान अभिनेत्रि भएको हुनाले मलाइ पनि उनको सफलतामा छविको कुनै हात छैन जस्तो लाग्थ्यो । तर, सत्यता भने त्यहि रहेछ किनकि, रेखाले छविलाइ छोड्ने बित्तिकै उनको करियर ओरालो लाग्यो । कतिसम्म ओरालो लाग्यो भने आजकल उनलाइ सुन्ने मानिस धेरै कम छन । तर, रेखाको जोश जाँगरमा भने कुनै कमि छैन । उनि उत्तिकै जोशिलो पारामा फिल्म निर्माण गरिरहेकि छिन । उत्तिकै जोशिलोपारामा भाबि प्रधानमन्त्रि मै हुँ भनेर दावि पनि गरिरहेकि छिन ।
रेखा थापाले नेपाली रेडियो नेटवर्कले आयोजना गरेको एक कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै थापाले उनको समय नसकिएको दावि गरेकि छिन।
उनले भनिन “लेखेर राख्नुस्, म बहुत सफल हुन्छु । म हन्ड्रेड प्रर्सेन्ट कुनै बेला यो देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्छु ।” उनले भनिन । कोटा वा किस्तिमा दिइएको पदले नभै आफ्र्न क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धामार्फत आफु देशको नेतृत्व तहमा पुग्ने उनको दावि रहेको छ ।
उनले चुनावमा महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ नलडाएर समानुपातिकमा मात्रै राखिएकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आफु जस्ता धेरै नारीहरु जो देशको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्ने भन्दै उनले थपिन ‘म प्रधानमन्त्रीको लायक छु । बनेरै छाड्छु ।”
रेखाले शुरुमा प्रचण्ड निकट भएर नेकपा माओबादि प्रवेश गरेर राजनिति गर्न खोजेकि थिइन । त्यसपछि नेकपा माओबादि छोडेर कमल थापाको निकट बन्दै राप्रपामा प्रवेश गरेकि थिइन । तर, जव पार्टि फुटेर दुइ टुक्राभयो उनले कमल थापालाइ छोडेर पशुपतिशमशेर राणाको निकट बन्न पुगिन ।
यसरी पार्टी फेर्दै हिँड्ने मान्छे कसरी क्षमतावान हुन्छ भन्ने प्रश्नमा थापाको जवाफ थियो : “प्रचण्ड पनि यही देशका नागरिक हुन्, पशुपतिशमशेर पनि यही देशका नागरिक हुन् । म विदेशी मान्छेसँग त छैन नि ।”
उनले पार्टी परिवर्तन गरे पनि देश परिवर्तन नगरेको रेखाको दावि छ । हुन त, नेपाल चलचित्र बिकास बोर्डमा नियुक्ति नपाएपछि अमेरिका पुगेकि रेखाले त्यो बेलामा अमेरिकामा पेट्रोल पम्प किनेर उतै बस्ने मनस्थिति बनाएको पनि हल्ला चलेको थियो । तर हल्लको पछि लाग्नु हुँदैन।
भिडियो हेर्नुस -